बामदेव गौतमका लागि कमला रोका बन्लिन् त बलीमा चढाएको बोको ?
> बामदेव गौतमका लागि कमला रोका बन्लिन् त बलीमा चढाएको बोको ?
२७ भाद्र २०७५, बुधबार ११:४१
काठमाडौं । ‘रुकुम पूर्वका जनताको माया र सम्मानलाई आत्मसाथ गर्दै समृद्द नेपाल र सुखी नेपाली निर्माण गर्ने अभियान रुकुम पूर्वबाट सुरुवात गर्ने संकल्पलाई फेरि एकपटक स्मरण गर्न चाहन्छु’ यो सांसद कमला रोकाले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोष्ट गरेको स्टाटस हो यो ।
उनले बुधबार केही सञ्चार माध्यमहरुमा रोल्पाबाट धनबहादुर बुढाले बामदेव गौतमका लागि राजीनामा नदिने भएपछि रुकुम पूर्वबाट कमला रोका, प्यूठानबाट दुर्गा पौडेल लगायतलाई राजीनामा गराउने प्रयास भइरहेको भन्ने समाचार आएका थिए ।
तिनै समाचारप्रति उनले आक्रोस पोखेर स्टाटस पोष्ट गरिन् । र उनको स्टाटस स्वभाविकै भएको र कसैका लागि बलिदानी नगर्नुस् भन्ने प्रतिक्रिया पनि आएका छन् । ‘उपनिर्वाचनका विषयमा मसँग जोडिएर आएको हुनाले जनतालाई स्पष्ट पार्न फेसबुकमा लेखेकी हुँ’ उनले भनिन्, ‘यो हल्ला मात्र हो र यो सपना देख्ने कुरा पनि होइन ।’
‘जनता महान हुन्, जनताको अभिमतलाई कुल्चिएर जानै सकिन्न नि’ उनले भनिन्, ‘रुकुमका जनताले मसँग ठूलो सपना देखेर भारी मत दिएका छन्, म त्यो मतलाई कदापि खेर जान दिन्न ।’
हुन पनि हो उनले मंसिर १० मा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आफ्ना १४ हजार ४ सय ३४ मत ल्याएर विजयी बनेकी थिइन् । उनका प्रतिद्धन्द्धी कांग्रेसका हरिशंकर घर्तीले घर्तीले ४ हजार ४ सय ६ मत पाएका थिए । रुकुम पूर्वमा २७ हजार ९ सय २८ मतदाता रहेका छन् ।
अहिले एकाएक पूर्वी रुकुममा बामदेव गौतमलाई भित्र्याउन रोकालाई राजीनामा गराउने हल्ला फैलिएपछि जिल्लामा अनेकौ चर्चा चल्न थालेको छ । रुकुममा कुनै पनि हातमा रोकाले राजीनामा दिन नहुने मत बढेको छ । रोकाले पनि मंगलबारदेखि नै जनताले फोन गरेर जनताको मतको सम्मान गर्न सुझाव आइरहेको बताइन् ।
‘सम्झौता गर्न थालेकी छन् कि के हो भनेर दवाव आइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘जनताभन्दा ठूलो अरु हुन सक्दैन । म जनताबाट निर्वाचित भउको हुँ र मलाई जनताले सजिलै उन्मुक्ति दिनेवाला छैनन् ।
तारो बने महिला
संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, दलहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निकै थोरै उम्मेदवार बनाएका थिए ।
१६५ सिटमा कांग्रेसले ९, एमालेले ५, माओवादी केन्द्रले ४, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १/१ जना महिला उम्मेदवार बनाएका थिए । राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक, राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले प्रतिनिधिसभामा महिला उम्मेदवार नै बनाएनन् । नेपाली कांग्रेसले ९ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको भए पनि एक जनाले पनि जित हात पार्न सकेनन् ।
तीमध्ये ६ जना महिलाले मात्रै जित हात परेका थिए । तिनैमा पर्छिन् कमला रोका पनि । माओवादीबाट कञ्चनपुर–१ मा विना मगर, ललितपुर–३ मा पम्फा भुसाल र रुकुम पूर्वमा कमला रोका विजयी भएका छन् । झापा–२ बाट एमालेकी पवित्रा निरौला खरेल, प्युठानबाट राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र स्याङजाबाट पद्मा अर्याल निर्वाचित भएका छन् ।
तर, अहिले बामदेव गौतमलाई सांसद बनाउन महलिामाथि प्रहार गर्न थालिएको छ । पहिलो चरणमा पूर्वी रुकुमबाट रोका र प्युठानबाट पौडेललाई हटाएर गौतमलाई भित्र्याउने खेल भइरहेको छ । यसलाई महिला अधिकारकमीृहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
को हुन् कमला रोका ?
२०३२ सालमा रुकुमको प्वाँङमा जन्मिएकी रोका २०४६ सालदेखि राजनीतिमा लागेकी हुन् । जनयुद्ध शुरु भएलगतै कक्षा १० को पढाई छोडेर उनी भूमिगत भएकी थिइन् ।
२०५३ सालमा माओवादीको जिल्ला समिति सदस्य भएकी कमला २०६१ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य भएकी थिइन् । उनी २०६२ देखि ०६३ सम्म ब्रिगेड कमिसार भएर पाल्पा लडाइँमा समेत सहभागी भएकी थिइन् । रुकुमबाट यसअघि माओवादीका तर्फबाट समानुपातिक सभासद् बनेकी थिइन् । उनी पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री पनि हुन् ।